20 sano Khibrad ah soosaarka alaabada adag ee alwaaxa, alaabada caadiga ah, qolalka jiifka, qolka cuntada, qolka fadhiga | Alaabta guryaha wanaagsan
Raaxada Suubban waa farshaxan,
Waqtigu wuxuu markhaati ka yahay dareenka dhabta ah!
Hadafkeenu waa inaan ku qancino macaamiisheenna saxnaan sare iyo tayo la isku halleyn karo si loo hubiyo in macaamil kasta uu dareemi karo raaxo iyo kalsooni uu ku qabo alaabtayada dalabkooda. Waxay leeyihiin astaamo badan oo damaanad qaadaya baahinta iyo adeegsiga.
Nakhshadeyntii ugu dambeysay ee fadhiga alwaaxa lagu sameeyo Shiinaha | Goodwin GH59
Gurigu waa halka qalbigu joogo. Xullo fadhiga alwaax qadiimiga ah ee qadiimiga ah oo qiimahoodu qiimo fiican yahay lagana sameeyay gurigaaga riyadaada. Waxaan nahay shirkad caan ah oo soo saarta alaabta Mareykanka ee Shiinaha, Goodwin ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Nagala soo xiriir sofainfo alwaax badan oo casri ah. Qofka lala xiriirayo: Tess Telefoon: 0086-76923188817 ama moobayl: 0086-13925525570 Website: www.goodwinfurniture.com
Fadhiga warshad Shiinaha, fadhiga madow ee qolka fadhiga Goodwin GH55
Waxaan u ballanqaadnay naqshadeynta iyo soo saarista sofaac madow oo duug ah qolka fadhiga in ka badan 20 sano. In lagu dadaalo tayada wax soo saarka iyo naqshadeynta. Alaabta guriga Goodwin, farshaxanka nolosha. Waxaan nahay shirkad caan ah oo soo saarta alaabta Mareykanka ee Shiinaha, Goodwin ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Nala soo xiriir si aad uhesho fadhiga madow ee qadiimiga ah faahfaahinta qolka fadhiga. Qofka lala xiriirayo: Tess Telefoon: 0086-76923188817 ama moobayl: 0086-13925525570 Website: www.goodwinfurniture.com
Alaabta guryaha wanaagsan ee qiimaha ugu fiican ee iibka ugu fiican ee Predics Prit Plock Booska White White GH43
Waxaan ka go'an nahay qaabeynta iyo soosaarka qiimaha iibka iibka ee iibka ah ee loo yaqaan 'Prital Prital Clians' oo alwaax ah in ka badan 20 sano. Si loogu dadajiyo tayada wax soo saarka iyo qaabeynta. Alaabta guryaha wanaagsan, farshaxanka nolosha.Waxaan nahay soo-soo-saarka caanka ah ee Agtawga Mareykanka ee Shiinaha, Goodwin waa doorashadaada ugu fiican.Nala soo xiriir si aad u hesho wixii dheeri ah ee iibka kulul ee iibka ah ee buuxinta buug-yariyada cad ee White White ah.Xiriir: TessTelefoon: 0086-769231388817 ama Mobile: 0086-13925525570Websaydhka: www.goodwinfmunet.
Qaabka Villa ee imaatinka sariirta maqaar dhaqameedka cusub | Goodwin GF01
Imaatinka cusub ee sariirta maqaarka ee qadiimiga ah waa alaabtayada ugu weyn, alaabada guryaha ee alwaaxda adag oo ay ku jiraan qolalka jiifka, fadhiga, qalabka cuntada, miisaska qaxwada, miisaska, kuraasta, sariiraha, iyo waxyaabo kale oo badan. Tayada Premium, naqshadaha astaanta ah. Waxaan nahay soo saaraha alaabada caanka ah ee caanka ah ee americanka ku leh Shiinaha, Goodwin ayaa ah xulashadaada ugu fiican. Nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad cusub oo sariir maqaar duug ah oo cusub. Qofka lala xiriirayo: Tess Telefoon: 0086-76923188817 ama moobayl: 0086-13925525570 Website: www.goodwinfurniture.com
Adeegga Customization ee shuruudaha gaarka ah ama caqabadaha leh.
1. Wax soo baara: Macaamiisha ayaa u sheegaya qaabka foomka la doonayo, tilmaamaha waxqabadka, meertada nolosha, iyo shuruudaha u hoggaansamida.
3. Maareynta Tayada: Si loo helo qaab-dhismeedyo tayo sare leh, waxaan ilaalineynaa waxtar& Nidaam Maarayn Tayo hufan.
4. Waxsoosaarka Caadiga ah: Marka noocyada noocyada ah loo ansaxiyay qaabeynta qaab ahaan, shaqo ahaan, iyo dalab ahaanba, soosaarku waa marxaladda xigta.
5. Waxaan diyaarin karnaa gaadiidka amarrada - ha ahaato adeegyadeenna is-dhexgalka, alaab-qeybiyeyaasha kale ama isku dar labadaba.
Waxaan si buuxda u dhex galnay adduunka wax soo saarka ee macaamiisheenna. Laakiin kaliya kuma qoyno astaamaha gaarka ah ee qaybta; waxaan sidoo kale si qoto dheer u dhex galnaa su'aalaha ay ka mid yihiin: "Maxaa macaamiisha macaamiisheena farxad geliya?" "Sideen u kicin karnaa dhamaadka rabitaanka iibsadaha macaamiisha?" Tani waa waxa aan kugu sameyn doono. Sidan ayaan u rogaynaa mashruucaaga mashruuceena.
Jawaab-celinta dhabta ah ee ka soo baxday macaamiisteena ugu dambeeyay ee adduunka oo dhan
Dhawaan jawaab-celinta dhabta ah ee ka socota macaamiisheenayadii ugu dambeeyay ee adduunka oo dhan.Waxaan nahay aagagga loo yaqaan 'Style Style Style Style' oo ah alaab-qeybiyeyaal ka soo jeeda Shiinaha oo leh 20 sano oo khibrad dhoofinta ah alaabta ah. Iyada oo leh wax soo saarka tayo sare leh iyo adeeg ka sarreeya, alaabooyinkayagu waxay ku daboolan yihiin gees walba oo adduunka ah.Macaamiisha badan ayaa ka soo iibsada alaabta guryaha warshadeena oo ay jecel yihiin alaabtayada guryuhu aad u badan yihiin jawaab celin fiidiyow ah.Nala soo xiriir si aad u hesho alaabta alwaaxda adag.Xiriir: TessTelefoon: 0086-769231388817 ama Mobile: 0086-13925525570Websaydhka: www.goodwinfmunet.
Macmiilka weedwin goodwine ee ku jira qolka showga u gaarka ah
Fiidiyowga dhabta ah iyo ra'yi-celinta ee macmiilkayaga. Aad buu u jecel yahay alaabteena badan.Naqshadaynta loo habeeyay ee alaabta guriga ayaa la heli karaa.Fadlan nagala soo xiriir si aad u hesho alaabta alwaaxda adag.Xiriir: TessTelefoon: 0086-769231388817 ama Mobile: 0086-13925525570Websaydhka: www.goodwinfmunet.
Miiska qaxwada ee xirfadleyda ah ee ku jira hoolka bandhigyada macaamiisha ee wa219
Ka xulo garoon alwaax adag oo qurux badan oo loogu talagalay qolkaaga (qolka jiifka / qolka cuntada / qolka cuntada / iwm). Ka xulo naqshadeena kala duwan oo ku dar qurxinta qolkaaga. Ka Dukaan khadka tooska ah.Nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo loo yaqaan 'WhideSole Cross'.Xiriir: TessTelefoon: 0086-769231388817 ama Mobile: 0086-13925525570
Alaabta wanaagsan ee 'Wackin'
Alaabta guryaha wanaagsan waa alwaax alwaax alwaax ah oo ka shaqeeya Shiinaha. 20 sano oo waayo-aragnimo dhoofinta alaabta guriga ah. Iyada oo leh wax soo saarka tayo sare leh iyo adeeg ka sarreeya, alaabooyinkayagu waxay ku daboolan yihiin gees walba oo adduunka ah.Waxaan nahay soo-saare guri oo caan ah oo ka mid ah Shiinaha, Goodwin waa doorashadaada ugu fiican.Nagala soo xiriir wixii ku saabsan qolalka alwaax ee ka badan ee alwaax ah.Xiriir: TessTelefoon: 0086-769231388817 ama Mobile: 0086-13925525570Websaydhka: www.goodwinfmunet.
Dongguan Goodwin Furniture Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2001, kuna taala magaalada Houjie, Dongguan, oo ah magaalo caan ku ah wax soo saarka dalka Shiinaha, kana kooban baaxad dhan 120,000 mitir murabac Waxaan diiradda saareynaa qaab-dhismeedka sare ee Mareykanka ee alwaax adag, oo u heellan naqshadeynta, soo-saarka iyo iibinta hudheellada / guryaha guryaha.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa in ka badan 580 shaqaale, oo ay ku jiraan ku dhowaad 100 injineernimada iyo shaqaalaha maamulka farsamada heerar kala duwan. Koox qaabeyn heer sare ah iyo kooxda adeegga, oo ku hoggaansamaya tayada tayada wax soo saarka iyo raacdada farsamooyinka kaamil ah. Maaddaama aan soo saare xirfadle ah nahay, waxaan iskaashi la leenahay shirkado badan oo caan ka ah waddanka sida Sheraton, Shangri-La, InterContinental, Marriott, Ritz Carlton, iwm. , Bulgaria, France, Dubai iyo dalal kale oo badan. Dhamaan macaamiisha waxay ku qanacsan yihiin tayadeena.
Goodwin Furniture waxay ku dhegan tahay fikradda horumar waara, ujeedadeeduna tahay inay dadka siiso qalab tayo sare leh iyo nolol xarrago leh. Waxaan ku kalsoonahay in tayada wax soo saarkeena iyo qaabkeena ay la kulmi karaan shuruudahaaga. Si diirran u soo dhawow dhammaan ganacsatada ganacsiga caalamiga ah inay nala soo xiriiraan oo ay booqdaan warshaddeena!